Mozika mavesatra Mandalo eto ny tarika Antariksh avy any Inde
Mpanakanto Indiana nosokajian'ny fahitalavitra Mtv ho malaza indrindra any Inde no tonga nanatanteraka fampisehoana teny amin'ny Plaza Ampefiloha omaly hariva nanomboka tamin'ny 7ora hariva.
“Kôpi Kôlé” sy “découverte” 2019 Lasan-dRa-Tin « Rossy » sy Mamiana
Nikatona tamin’ny alalan’ny fampisehoana lehibe tao amin’ny Coliseum Antsonjombe ny fifaninanana ara-java-kanto sy « Kôpi Kôlé » “Découverte” 2019,
Fihavanana Malagasy Hatao vakoka tsy hita maso
Tapitra tamin’ny faran’ny herinandro teo ny fivoriana fahatelo farany nataon’ny Komitin’ny Fampihavanam-Pirenena (CFM).
Taom-baovao Malagasy tany Toamasina Tapaka ny vato lehibe saika hatao tsangam-bato
Ambohipihaonan’ny sokajin’olona samihafa eto amin’ny firenena ny tao Toamasina ny faran’ny herinandro teo satria omaly 22 septambra no nankalazana ny Taom-baovao Malagasy iraisana.
Raha mpanoratra miisa 3 monja no nanangana sy nikambana tao ny 11 janoary 1989 dia efa mahatratra 300 isa izany ankehitriny, hoy Ranoe, anisan’ireo mpikambana ela nihetezana, izany hoe nitombo avo 100 heny. Hanatanterahana ny teny filamatra manao hoe « Iainako ny teniko hanamasina ny taniko. » moa dia maro ireo hetsika hotontosaina manomboka anio toy ny velakevitra hanazavana ireo karazana asa soratry ny mpikambana ary ny sabotsy izao dia hisy ny Paotsatroka ho an’ny mpanoratra J. Nalisoa Ravalitera.